Io no fampitam-baovaon'ny mpitandro filaminana any an-toerana mahakasika ny raharaha Faharetana, Morarano, ao amin'ny kaominina ambanivohitra Imerintsiatosika, Arivonimamo. Ny voalohan'ny herinandro teo no nanomboka nanatanteraka ny didim-pitsarana ho fanalana ireo mponina heverina fa mibodo io tanin'ny orinasa iray io ny tomponandraikitra ara-pitsarana sy ara-miaramila ka niteraka sakoroka. Tsy nanana taratasy maha azy ireo ny saha anefa ny mponina na dia efa taona vitsy aza izy ireo no nanamainty molaly izany. Tsy nisy fandratrana na fanamborana olona velively nandritra ny fanalana ireto farany. Nanohy ny fanazavany ny loharanom-baovao iray izay vokatry ny fanadihadiana lalina notanterahin'ny mpanao gazety fa niasa tao amin'ilay orinasa ka voaroaka tao ny olona iray. Nony nirotsaka hofidiana izy dia namaly faty ka nampanantena ireo vahoaka teo an-toerana fa hozarain amin'izy ireo io toerana midadasika misoratra amin'ny orinasa io. Avy dia nampandany azy tamin'ny fifidianana ireo vahoaka tsy mandidy harona izay manantena hatrany fa manam-pahefana masi-mandidy amin'izany io nofidian'izy ireo io.